Ny fampisehoana mahafinaritra an'i Marco Borsato ao amin'ny Kuip any Rotterdam! : Martin Vrijland
Tsy hoe efa teo aho, fa tokony notaterina: ny omaly dia feno ny fampisehoana mahatalanjon'i Marco Borsato ao De Kuip. Ireo anarana goavambe ankehitriny dia tao: Davina Michelle, Maan, André Hazes, Lil 'Kleine, Armin van Buren ary angamba adinoko vitsivitsy. Nahoana no tsy maintsy lazaina izy io? Satria mitodika manodidina ny foto-kevitra momba ny mofo sy ny lalao izy ary mahaliana ny mahita ny olona an'arivony maro be dia be atao loatra rehefa mankalaza azy ireo. Na izany aza, ny ankamaroany dia tsy mahatsapa izany ho rindrin'ny fonja, satria anisan'ny ekipa mpanao trano, mpamatsy, mpitantana na mpiambina ny fonja vaovao. Fonjany tsy hita maso tsy misy vato vatosoa ary tsy misy barazy hita maso ary tsy misy mahita azy io. Tena ratsy izany ary tsy te-ho voan'ny fanoherana isika.
Azonao atao ny manontany hoe: Raha toa i Marco Borsato dia nandray anjara tamina fampielezan-kevitra mahery vaika tamin'ny alalan'i Davina Michelle (jereo ity lahatsoratra ity), moa dia mbola ho mirehareha amin'ny asany izy ary faly loatra amin'ny kaontin'ny banky matevina, fantany fa mety hifidy fiovan'ny tovovavy ao anatin'ny taona vitsivitsy ny zanany. Moa ve i John de Mol, tompon'ny ANP, faly amin'ny vola an'arivony rehetra ao amin'ny kaontiny ao amin'ny banky sa ny hafanana amin'ny alina rehefa manonofy izy fa tompon'andraikitra amin'ny famokarana vaovao sandoka amin'ny PsyOp? Ho sambatra ve isika ao anatin'ny taona vitsivitsy raha miaina eo ambanin'ny rafitra fitondrana tsy refesi-mandidy isika? Amin'izany fotoana izany anefa dia tsy manana fahalalahana intsony ianao (ara-bakiteny, satria atidoha ny atidohanao) mba hahafahana mieritreritra izany.
Tsy mila mionona intsony ianao. Tsy tokony hanantena ihany koa ianao fa ireo mpamboly Truman Show dia ho tampoka eo alohanao amin'ny ho avy. Tian'izy ireo hifehy tanteraka ny mponina manerantany mifehy ny rahona. Noho izany dia mila miova ny tenanao ianao! Vakio eto ianao manao izany.
Lisitry ny rohy loharano: imdb.com
Ny positimisma sy ny fanantenana!
Elon Musk mikasika ny teoria simulation, ny fanantenana ary ny "dia"
Tags: 2019, André Hazes, ANP, Armin van Buren, fampisehoana, Davina Michelle, Featured, john de mol, Kovetabe fandroana, Lil 'Kleine, maan, Rotterdam
31 May 2019 amin'ny 22: 33
Ny hafatra manan-danja indrindra avy amin'ny tantaran'ny Trinite dia ny tsy maintsy handresy ny tahotra ny ho tonga. Amin'ny faran'ny horonantsary dia tonga eo amin'ny rindrina izy ka tsy maintsy miakatra haingana. Indray mandeha any an-tampony dia tsy maintsy miditra amin'ny maizina avy amin'ny hazavana (kintana) izy. Tsy maintsy mamakivaky ny maizina ianao aloha vao tonga any amin'ny tena hazavana.
Mahatsikaiky loatra ny hoe marina fa miakatra eny ambonin'ny rindrin'ny ranomandry izay manodidina ny tany isika mba hahitana ireo kontinanta 33 hafa. Misy olana iray ihany fa mbola eo amin'ny toetra maha-olona anao ihany ianao ankehitriny. Ity no fandrika amin'ny tehezin'ny tontolon'ny planeta, mbola mitazona anao hatrany amin'ny toetranao ankehitriny ianao.
Heveriko fa tsy misy afa-tsy lalana iray ihany ary izany dia amin'ny fahafatesana (tahotra).
Aleontsika tsy mieritreritra izany mandritra ny fotoana lava, noho izany dia mahafinaritra ny fikarakarana ny antoko iray.
Androany dia mena 🎈😉
1 June 2019 ao amin'ny 01: 53
Ny teorian'ny tontolon'ny latabatra dia kolikoly diso (fampahalalam-baovao diso) amin'ny sombintsombiny (ambany) izay iainantsika (mieritreritra). Ny tanjontsika dia ny fahafantarantsika fa miaina ao anatin 'ny simulation (lisitry ny ambany kokoa) i Luciferian.
1 June 2019 ao amin'ny 01: 54
Aiza ny "fiainana" tsy ny teny marina. Isika dia mandinika ny simulation (mpilalao marobe) ary ny (ny fahatsapana sy ny filalaovana) fanahy no iray amin'ny mpitantana.
« Michael P. Thijs H. Jos B. ny tranga rehetra momba ny famonoana ny media dia mitarika amin'ny fampidirana haingana ny lalàna henjana izay mahakasika ny tsirairay
Ny Thijs H. PsyOp dia tsy maintsy manafoana ny tsiambaratelo manokan-tena ary efa vitaina amin'izao fotoana izao »
Total fitsidihana: 4.140.788
Fihetsiketsehana ny alahady 28 jona hanala ny fitiavana, faharetana ary fahatokisan-tena amin'ny fiarovana Virus Madness
Inona no itovizan'ny Black Lives Matter, LGBTI sy ny vaksiny Covid-19?
Martin Vrijland op Coronavirus covid-19: izay tsy maheno an'i Maurice de Hond sy Willem Engel
maso iray misokatra op Coronavirus covid-19: izay tsy maheno an'i Maurice de Hond sy Willem Engel
Adriaan W op Coronavirus covid-19 sy siansa: Ahoana ny fomba hidirany ao amin'ny vatanao ary amin'ny fomba ahoana no hamindranao azy?
guppy op Ny boky vaovao Martin Vrijland mitondra ny lohateny hoe 'Coronavirus covid-19 aiza no hiafarany?' azo ampiasaina izao